Baarlamaanka Puntland oo dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho
June 29, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubna ka ah Federaalka.
Kadib kulan uu ku yeeshay Garoowe maanta oo Isniin ah, golaha baarlamaanka Puntland ayaa soo saaray war-saxaafadeed ka kooban 13 qodob oo ku saabsan qodobo sharci ah oo muran ka dhex-dhaliyay golayaasha wakiilada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kii ugu dambeeyay uu ahaa meel-marinta kuraas gobolka Banaadir laga siiyay aqalka sare.
“Goluhu wuxuu u soo jeedinayaa golayaasha Dowladda Puntland in aanay qayb ka noqon shirka uu ku baaqay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ee 5-6 bisha July 2020, inta laga saxayo xadgudubka sharci e haayadaha Dowladda Federaalka ay galeen.” Sidaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeed.
Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya 25-kii bishan June ayaa Madaxweyne Farmaajo uu ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada in ay ka soo qeybgalaan shir ka dhici doona Muqdisho bilowga bisha soo socota.
Ajandaha shirka ayaa noqon doona sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argixisada, dhammeystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, ayaa lagu sheegay bayaanka.
Madaxtooyada Puntland weli kama aysan hadlin baaqa maanta ka soo baxay golaha baarlamaanka.
July 1, 2020 Madaxweyne Deni oo sheegay in uu aqbalayo baaqii baarlamaanka Puntland ee ahaa in uusan ka qeybgalin shirka Muqdisho
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Axad ah u safray dalka Shiinaha. Kahor inta uusan tagin Deni ayaa warbaahinta u sheegay ujeeada safarkiisa dhiinaha, waxaana uu yiri: “Waxaan maanta safar shaqo [...]